Kufa, kukuvara, kukuvara kunotaurwa sekudengenyeka kwenyika kukuru kuri kuitika kuHaiti
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Haiti Kuputsa Nhau » Kufa, kukuvara, kukuvara kunotaurwa sekudengenyeka kwenyika kukuru kuri kuitika kuHaiti
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Caribbean • Hurumende Nhau • Haiti Kuputsa Nhau • Hospitality Industry • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Tsunami yeU.S. Tsunami Centres dzakapa tsunami kutyisidzira, asi kutyisidzira kwakasimudzwa mukati meawa.
Kudengenyeka kwenyika kune simba kwakaparadza Haiti.
Mishumo isina kuvimbiswa inoratidza kufa kwakawanda uye kukuvara kwakawanda.
Yambiro yeTsunami yakaburitswa, asi yakamiswa nguva pfupi yapfuura.
Kudengenyeka kwenyika kukuru, kune simba kudarika kudengenyeka kwenyika kwakaipisisa kwa2010, kwarova Haiti mangwanani nemusi weMugovera mangwanani, zvichikonzera kukuvara kwakanyanya kumaodzanyemba kwenyika yeCaribbean.
US Geological Survey yakaisa kudengenyeka kwacho zvakanyanya pa7.2, kana kuti “huru.” Panotyisa kudengenyeka kwacho kwaive makiromita gumi nemaviri (12 mamaira) kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweSaint-Louis-du-Sud, guta rine vanhu vanopfuura zviuru makumi mashanu.
Mishumo isina kuvimbiswa inoratidza kufa kwakawanda uye kukuvara kwakawanda. Iyo USGS yakataura kuti "vanhu vazhinji vakakuvara vanogona uye njodzi inogona kunge yakapararira" mu Haiti.
Kukuvadza kwakanyanya kwakataurwa kuHaiti, nemifananidzo kubva kuguta riri padyo reJeremie ichiratidza zvivakwa zvakadhirika uye migwagwa yakazara nemarara.
Vhidhiyo kubva kuna Jeremie yakaratidza makobvu eguruva achizadza mumigwagwa, dzimba dzichiita matongo.
Vamwe vanhu vanoisa pasocial media vanonzwa kunzwa kudengenyeka kure kure seJamaica, uye iyo US Tsunami Yambiro Centres yakaburitsa tsunami kutyisidzira nguva pfupi yapfuura. Zvisinei, kutyisidzira kwakasimudzwa mukati meawa.
Kudengenyeka kwakarova maminetsi mushure mekudengenyeka kwenyika kwakakura 6.9 kwakazunza Alaska Peninsula. Zvisinei, kudengenyeka kweAlaska kwakarova nzvimbo ine vanhu vashoma, uko mukana wekukuvara wakaderera zvakanyanya.